RASMI: Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Real Madrid oo laga helay Korona Fayras – Gool FM
(Madrid) 17 Maajo 2021. Laacib muhiim ah oo ka tiran kooxda Real Madrid ayaa la soo sheegayaa in laga helay caabuqa safmareenka ah ee Korona Fayras.
Kooxda Real Madrid ayaa ku shaacisay maanta oo Isniin ah warbixin rasmi ah ay soo saartay, in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Toni Kroos uu ku dhacay xanuunka Korona Fayras.
Warkan ayaa wuxuu imaanayaa kaddib markii ay kooxda Real Madrid sheegtay Jimcihii la soo dhaafay in Toni Kroos uu seegi doono tababarka kooxda maalmaha soo socda sababo la xiriira inuu galayo karantiil, kaddib markii uu xiriir la sameeyey qof qaba Korona Fayras.
Warka rasmiga ah ee ka soo baxay kooxda Real Madrid ayaa lagu shegay in Toni Kroos uu xiriir toos ah la sameeyay qof qaba Korona Fayras, taasoo ka dhigtay kooxda inay galiso karantiil, kahor inta aysan tijaabooyinkii la marsiiyey muujinin inuu qabo KOFID 19.
Si kastaba ha ahaatee, Toni Kroos ayaa ka maqnaan doono kulanka ugu dambeeya ay Real Madrid kula ciyaari doonto horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan kooxda Villarreal.
Ter Stegen oo shaaciyey inuu seegi doono ciyaaraha Euro 2020... (Waa nuucee dhaawaca seejinaya Koobka qarammada Yurub?)